Bastoolad uu isku dilay nin caan ah oo lagu kala iibsaday boqolaal kun oo doolar | Saxil News Network
Bastoolad uu isku dilay nin caan ah oo lagu kala iibsaday boqolaal kun oo doolar
Qoriga la rumeysan yahay inuu isku dilay van Gogh
Qorigii uu isku dilay farshaxanistihii u dhashay Netherlands, Van Gogh ayaa la sheegay in lagu iibiyay$182,000 doolar, qiimahan ayaa waxaa uu ka badan yahay saddex jibaar qiimihiisu caadiga ahaa.
Qorigan duuga ah ayaa waxaa laga soo gatay ganacsade.
Waxaa goob qoriga kasoo qaaday beeraley sannadkii 1965-tii halkaas oo la rumeysan yahay inuu isku dilay farshaxaniistaha.
Waxaa jiraa shaki ah sidii lagu xaqiijin lahaa qorigan inuu yahay midkii uu isku dilay Van Gogh.
Markii ay aheyd, 27-dii bishii July sannadkii 1890-kii, farshaxanistahan u dhashay dalka Netherlands ayaa waxaa uu aaday dhul beer ah oo u dhaw tuulada Auvers-sur-Oise oo ku taalla waqooyiga magaalada Paris ee Faransiiska, waxaa uu iska toogtay xabadka isaga oo adeegsanayo qoriga, sid ay wararku sheegayaan.
Sawirrada aan la arag ee weerarkii daaraha mataanaha ee Mareykanka
Qorigan oo ah mid yar oo jeebka lagu sito ayaa waxaa uu lahaa awood aanan badneyn, waxay ku qaadatay Van Gogh maalmo inuu u geeriyoodo dhaawacii soo gaaray .
In kabadan 70 sanno kaddib, qorigan duuga ah waxaa laga helay dhul beer ah oo ku taalla deegaanka chateau oo ah goobtii uu ku noolaan jiray ninkaas, dadka falanqeeya xaaladdaas ayaa sheegay in qoriga uu ku aasnaa dhulka hoostiisa muddo gaareysa 50 sanno ilaa 80 sanno.
Hadda waxay u muuqata inuu meesha ka baxayo qori horraan la sheegay inuu ahaa midkii uu isku dilay Van Gogh oo la dhigay matxafka magaalada Amsterdam.
Macadka Van Gogh oo dusha kala socday gurigii farshaxanistaha ayaa cambaareeyay xaraashka intaas la eg ee lagu sameeyay qorigii galaaftay nolosha ninkaas.
“Ma jiro caddeyn muujineysa in qorigan duuga ah lala xiriirin karo dhimashadii Van Gogh isla markaasna ay kasoo horjeedaan in laga ganacsado wax masiibo dhaliyay balse loo baahan yahay qaddarin” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay macadka.
Xarun xaraashta waxyaabaha taariikhii ah oo iibisay hubkan ayaa qirtay inaysan heyn caddeyn muujineysa in qoriga uu yahay midkii uu isku dilay farshaxanistaha balse wakhtigii uu dhacay dilka ay hayaan.
“Baaritaanno la sameeyay ayaa muujinaya in qoriga la adeegsaday balse uu dhulka ku aasnaa tan iyo sannadkii 1890-kii oo ah xilliggii uu is toogtay Van Gogh”
Xarunta ayaa sidoo kale sheegtay in xogta ay hayaan ay muujineyso in qoriga uu yahay midka uu isku dilay Van Gogh.